December 2016 – Radio KeyFM
Shilal Baabuur oo ka dhacay Wadada u dhaxaysa Nairobi iyo Nakuru
31st December 2016	Somali Language 0
Ilaa Lixdan Qof ayaa ku dhaawacmay Labo shil oo ka dhacay wadada weyn ee isku xirta Nairobi iyo Nakuru. Saddex kamid ha dadka dhaawacmay ayaa xaaladoodu halis tahay . Bas ay saarnayeen 50 rakaab ah ayaa darawalkii waday uu lumiyay xakamaynta gaariga,waxaana uu ku dhacay geed ku yaala meel ku …
Ruto oo shacabka Uasin Gishu ugu baaqay isu diiwaan galinta Cod bixinta
Madaxweeyna ku xigeenka Kenya Wiliam Samoue Ruto oo booqosho ku jooga gobolka Rifta valley ayaa wuxuu shalay kula Hadlay dadweynaha gurigiisa ku yaala Uasin Gisho.Waxaa isugu yimid gurigiisa in kabada 4000 oo qof . Willliam Ruto ayaa wuxuu aad ugu dheeraadey ka hadlida arimaha la xariiro doorashooyinka iyo isu diiwaan …
Mucaaradka iyo Dowlada oo ka wada qayb galay Aaska John Keen
Aaska loo sameeyay siyaasigii rug cadaaga ee qowmiyada Masaaiga John keen ayaa waxaa isugu yimid kumanaan Kenyaan ah oo isugu jiro siyaasiyiin iyo bulshada rayidka qeeybahooda kala gedisan sida ururada haweenka,dhalanyerida.odey dhaqameedyo iyo weliba aqoonyahniin. Dhamaan inta nasiibka u yeelatey in ay kahadasho aaska John keen ayaa waxeey aad u …
Gaafaha kawntiga Tana Rifa oo eedeymo usoojediyay wasarada caafimahadka
29th December 2016	Somali Language 0
Xuseen Dado oo ah Gafanaha kowntiga Tana Rifa ayaa cambareyay heshiisyadii ay wasarada caafimaadka la gashay dhaqaatiir sanadkii 2013 oo ku aadana in wax laga qabto cabashada dhaqaatiirta dhanka mushaar yarida. Xuseein Dado ayaa sheegay in qaabka uu u dhacay heshiiskaas uu ahaa mid qaldan . sido kale Gafanaha ayaa …
kawntiyada qaar oo go,aan isku mid ah kaqaatay mushaaradka dhaqaatirta
Dhaqaatiirta ka howlgasha isbitaalada dawladda ayaa ku jirta shaqa joojinta tan iyo shantii bishan Disembar iyagoo dalbanayo in mushaar kordhin boqolkiiba 300.loo sameeyo Maamulada kowntiyada Nairobi, Makueni, Nakuru, West pokot , Kisumu ,Homa Bay ,Siaya ,Busia iyo kuwa kale oo badan ayaa sheegay inaysan wax mushaar ah siini doonin dhaqaatiirta …
Afar kamid liiska burcad sida weyn loo raadinayay oo lagu xiray Mombasa
27th December 2016	Somali Language 0
Ilaa Afar qof oo lagu tuhmayo in ay kamid yihiin dambiilayaasha ugu waaweyn burcadnimada kowntiga Mombasa ayaa xabsiga loo taxaaabay,kadib markii ay ciidamada boolisku ay gacanta kusoo dhigeen xili ay abaabulayeen in ay fal dambiyeed gaystaan. Afarta qof ayaa ku jiray liiska burcada ay boolisku raadinayeen. Mid kamid ah tuhmanayaasha …
Booliska Nyandarua oo Baaraya Haweenay lagu dilay Bosnia
Magaalada Bosnia ee kowntiga Nyandarua waxaa lagu diley qof dumar ah oo 40 jir ah balse weli aan la aqoonsani cida ka dambeeysa falka lagu khaarijiiyry haweeyneeydaan. Ciidamada booliska ayaa xiray toddoba ruux oo ka tirsan qooyska haweeyneeyda la diley,waxaana ku socdo baaritaano la xiriira ilka haweeyneeyda oo dhacay habeenkii …
Qof ku dhintay Weerar ay soo qaadeen burcad lagu tuhmayo Pokot
Ilaa hal qof ayaa ku dhintay weerar lagu soo qaaday aaga Chemwoyo iyo Murkutwo. Kooxda weerarka soo qaaday ayaa lagu tuhunsan yahay burcada xoolaha dhacda ee Pokot. Dadka deegaanka ayaa sheegay in aysan jirin xoolo la xaday intii ay socotay is rasaasaynta. Xoolalayda Marakwet ayaa rasaas ku jawaabay xiliga ay …
Kenya : Tirada bukaanada Viruska HIV/Aids oo korartey
Warbixiin aay soo saartey hay’ada qaran ee latacaalida cudurka dilaaga ah ee Aidska ee magaceeda loosoo gaabiyo (NACC0) ayaa soo saartey warbixinta baaritaanadii ay sameeysay ilaa sanadkii 2014. Warbixiinta oo lasoo bandhigey Talaadadii lasoo dhaafey ee 22 /12/2016 lagu sheegey dadka cusub ee ku dhacayo viruska Aidska in ay yihiin …
Taliyaha KDF oo ugu baaqay ciidamada in ay ka fogaadaan siyaasada
26th December 2016	Somali Language 0
Wasiirka gaashaandhiga Raychelle Omamo iyo taliyaha ciidamada difaaca Samson Mwathethe ayaa ugu baaqay ciidamada milatriga in ay ka fogaadaan siyaasada,gaar ahaan doorashooyinka kusoo fool leh dalka sanadka dambe. Samsom Mwathethe ayaa si kadis ah booqasho ugu tagay ciidamada Kenya ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya,gaar ahaan magaalada Kismayo isaga oo …